စိတ်ကူးယဉ် PS5 – REDPlayer
Joseph Dumary ဆိုတဲ့သူကို ကြားဖူးချင်လည်းကြားဖူးနိုင်ပါတယ်။ မဟုတ်လည်း သူပြောတဲ့ PS5 အကြောင်းလေးဖတ်လိုက်မိလို့ပါ။ သူလိုငါလို console သမားတွေမျော်မှန်းထားတာနဲ့ Joseph လို designer တစ်ယောက်စိတ်ကူးထားတာနဲ့ ဘယ်လောက်နီးနီးစပ်စပ်ရှိနိုင်မလဲသိရတာပေါ့။
အပြင်ပိုင်းမှာတော့ အရင် ပုံစံတွေကနေ သိပ်ပြီးခွဲထွက်နေတာမျိုးမတွေ့ရပါဘူး။ (fake ကြီးလေ)။ အတွင်းပိုင်း utility နဲ့ feature တွေကိုပိုပြီး အားထည့်ထားတဲ့ ပုံစံပါပဲ။. ဖတ်မိသလောက်အချက်တစ်ချို့ကိုတော့ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။. ကိုယ်လိုချင်တာတွေ မျော်မှန်းနေတာတွေနဲ့တော့ ငြိစရာအကြောင်းလည်းသိပ်မမြင်ပါဘူး။
Smart Console : အသစ်ထွက်လာမယ့် console က gamer တစ်ဦးရဲ့ အမူအကျင့်တွေကိုမှတ်ထားပြီး controller ရဲ့ ခလုပ်တွေ၊ game setting တွေကို ကိုယ်တိုင်ပြင်စရာမလိုတော့ပဲ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ ပြင်ထားပေးတာမျိုးလုပ်လာပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီ ဂိမ်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ တစ်ခြား 3rd party app တွေသွင်းပေးတာမျိုးကအစပေါ့။
Air HDMI – အခုတော့ အများစုက HDMI cable နဲ့ပဲချိတ်ဆက်အသုံးပြုနေကြဦးမှာပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်လာမယ့် console မှာတော့ wireless အဖြစ်မြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ရုပ်ထွက်ကို မထိခိုက်စေပဲ အနည်းဆုံး ၄မီတာ (4m) လောက်ကနေ ကောင်းကောင်းကစားလို့ရနိုင်ပါတယ်။ (ပေနဲ့ဆိုရင်တော့ ၁၃ပေ လောက်ဖြစ်မှာပါ)။
Eco Mode – PS4 Eco လိုပဲ standby အချိန်နဲ့ menu မှာရှိနေတဲ့ အချိန်တွေ၊ တစ်ခြား ဓာတ်ပုံတွေဘာတွေကြည့်နေတဲ့ အချိန်မှာ မီးအသုံးပါဘူး (မီတာမတက်ဘူးဆိုလိုတာပါ) အထဲမှာ အားပြန်သွင်းလို့ရတဲ့ rechargeable battery တစ်ခုပါလာပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် save game လုပ်ပြီး စိက်ကို ချက်ချင်း ပိတ်တဲ့အခါ သိသာလာနိုင်ပါတယ်။
New DualShock – PS5 မှာတော့ အလယ်မှာ ဧရိယာပိုကျယ်လာတဲ့ touch screen တစ်ခုပါလာနိုင်ပြီး screen ပြောင်းစရာမလိုပဲ instant access တွေလုပ်လို့ရလာပါလိမ့်မယ်။. ဥပမာ message နဲ့ invitation လိုမျိုးတွေပေါ့။. Finger print scanner လည်းဒီမှာပဲရှိပါလိမ့်မယ်။ “Energous” နဲ့လည်း ပူးပေါင်းထားပြီဆိုတော့ နောက်ပိုင်း controller တွေအကုန်လုံးက wireless charging ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ console နဲ့ချိတ်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာ အားသွင်းနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အားသွင်းစရာလည်း မလိုနိုင်တော့ပါဘူး။
Stress Sensor -ဒါကတော့ အခု VR နဲ့ AR ခေတ်ထလာချိန်မှာ ကိုကစိတ်လှုပ်ရှားလေ ဂိမ်းကပိုခက်လေဖြစ်လာမယ့် ပုံစံမျိုးပါ။ Fifa ဖြစ်ဖြစ် FPS, Battle Royale တစ်ခုခုဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် NFS ဖြစ်ဖြစ် ကစားတဲ့ အခါ ကိုယ့်ရဲ့ stress level များတဲ့အခါတွေရှိပါတယ်။ ဒီအချိန်တွေမှာ အမှားလုပ်ရင် ကိုယ့်အမှားတွေကိုမှတ်ထားပြီး console ကကိုယ့်ကို challenge လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတစ်ခုကတော့ ဂိမ်းလောကတစ်ခုလုံးအတွက် အသစ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Real Dynamic Weather Technology – အပြင်တကယ့်လောကမှာ နှင်းတွေကျနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် မိုးဖွဲဖွဲကျနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ရဲ့ game ထဲမှာလည်း အပြင်ကအတိုင်း ရာသီဥတုကိုလိုက်ပြီးပြောင်းလဲပေးပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဂိမ်းမှာမဆို ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့််မယ်။
Translate By Playstation – online ရောက်သွားတဲ့ အခါ gamer တိုင်းရဲ့ မိခင်ဘာသာစကားကမတူပါဘူး။ gaming language ဆိုတာရှိပေမယ့် gamer ဆိုတဲ့သူတိုင်းလည်း နားမလည်ပါဘူး။ “Boss aggro big, wait, omw” ဆိုတာလောက်သိကြပေမယ့် အမြဲတမ်းတော့လည်း party တိုင်းပွဲမစည်ဘူးမဟုတ်လား။ ဒီအတွက် ဘာသာစကားတစ်ချို့ကို realtime transltion ပါလာနိုင်ပါတယ်။ audio ပဲဖြစ်ဖြစ် chat ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။
ဒီလောက်ပါပဲ၊ တစ်ခြား အချက်တွေတော့ရှိပါသေးတယ်၊ technical သိပ်ဆန်တဲ့အခါလူတိုင်းအတွက် မဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ မဆက်တော့ပါဘူး။ ဒီလောက်ဆိုရင်ပဲ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တော မလိုချင်တာတွေကိုမှန်ူလို့ရမယ် ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့အတွက် personally ပြောရရင်တော့ bullshit ပါဗျာ။ Smart console နဲ့ Stress sensor ကတော့ လက်ရှိ AI နည်းပညာအရ ဖြစ်သင့်တာကြာနေပါပြီ။ ကျန်တာတွေက အရေးမပါတဲ့ ကိစ္စတွေပါ။ compatibility ကိစ္စပဲလိုချင်တာ။ သိတယ်မဟုတ်လား။
လုပ်လိုက်ဦးလေ၊ နောက်ဆုံးတစ်ခုက no disc ဆိုပြီးတော့။ hacker friendly version ဖြစ်သွားတာပေါ့… ဟေးဟေး..
သူကတကယ်တော့ concept တစ်ခုအားအားယားယားလုပ်ထားတာမျိုးပါ။ ဒါပေမယ့် တကယ့် console သမားတွေဘာလိုချင်လဲသိရင်ကောင်းမယ်။
Joseph Dumary ဆိုတဲ့သူကို ကွားဖူးခငျြလညျးကွားဖူးနိုငျပါတယျ။ မဟုတျလညျး သူပွောတဲ့ PS5 အကွောငျးလေးဖတျလိုကျမိလို့ပါ။ သူလိုငါလို console သမားတှမြေျောမှနျးထားတာနဲ့ Joseph လို designer တဈယောကျစိတျကူးထားတာနဲ့ ဘယျလောကျနီးနီးစပျစပျရှိနိုငျမလဲသိရတာပေါ့။
အပွငျပိုငျးမှာတော့ အရငျ ပုံစံတှကေနေ သိပျပွီးခှဲထှကျနတောမြိုးမတှရေ့ပါဘူး။ (fake ကွီးလေ)။ အတှငျးပိုငျး utility နဲ့ feature တှကေိုပိုပွီး အားထညျ့ထားတဲ့ ပုံစံပါပဲ။. ဖတျမိသလောကျအခကျြတဈခြို့ကိုတော့ရေးပေးလိုကျပါတယျ။. ကိုယျလိုခငျြတာတှေ မြျောမှနျးနတောတှနေဲ့တော့ ငွိစရာအကွောငျးလညျးသိပျမမွငျပါဘူး။
Smart Console : အသဈထှကျလာမယျ့ console က gamer တဈဦးရဲ့ အမူအကငျြ့တှကေိုမှတျထားပွီး controller ရဲ့ ခလုပျတှေ၊ game setting တှကေို ကိုယျတိုငျပွငျစရာမလိုတော့ပဲ ကိုယျ့စိတျတိုငျးကြ ပွငျထားပေးတာမြိုးလုပျလာပါလိမျ့မယျ။ နောကျပိုငျးမှာအဲ့ဒီ ဂိမျးအတှကျလိုအပျတဲ့ တဈခွား 3rd party app တှသှေငျးပေးတာမြိုးကအစပေါ့။
Air HDMI – အခုတော့ အမြားစုက HDMI cable နဲ့ပဲခြိတျဆကျအသုံးပွုနကွေဦးမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ နောကျလာမယျ့ console မှာတော့ wireless အဖွဈမွငျတှရေ့နိုငျပါတယျ။ ရုပျထှကျကို မထိခိုကျစပေဲ အနညျးဆုံး ၄မီတာ (4m) လောကျကနေ ကောငျးကောငျးကစားလို့ရနိုငျပါတယျ။ (ပနေဲ့ဆိုရငျတော့ ၁၃ပေ လောကျဖွဈမှာပါ)။
Eco Mode – PS4 Eco လိုပဲ standby အခြိနျနဲ့ menu မှာရှိနတေဲ့ အခြိနျတှေ၊ တဈခွား ဓာတျပုံတှဘောတှကွေညျ့နတေဲ့ အခြိနျမှာ မီးအသုံးပါဘူး (မီတာမတကျဘူးဆိုလိုတာပါ) အထဲမှာ အားပွနျသှငျးလို့ရတဲ့ rechargeable battery တဈခုပါလာပါတယျ။ တနညျးအားဖွငျ့ save game လုပျပွီး စိကျကို ခကျြခငျြး ပိတျတဲ့အခါ သိသာလာနိုငျပါတယျ။
New DualShock – PS5 မှာတော့ အလယျမှာ ဧရိယာပိုကယျြလာတဲ့ touch screen တဈခုပါလာနိုငျပွီး screen ပွောငျးစရာမလိုပဲ instant access တှလေုပျလို့ရလာပါလိမျ့မယျ။. ဥပမာ message နဲ့ invitation လိုမြိုးတှပေေါ့။. Finger print scanner လညျးဒီမှာပဲရှိပါလိမျ့မယျ။ “Energous” နဲ့လညျး ပူးပေါငျးထားပွီဆိုတော့ နောကျပိုငျး controller တှအေကုနျလုံးက wireless charging ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ console နဲ့ခြိတျထားတဲ့အခြိနျတှမှော အားသှငျးနမှောဖွဈတဲ့အတှကျ အားသှငျးစရာလညျး မလိုနိုငျတော့ပါဘူး။
Stress Sensor -ဒါကတော့ အခု VR နဲ့ AR ခတျေထလာခြိနျမှာ ကိုကစိတျလှုပျရှားလေ ဂိမျးကပိုခကျလဖွေဈလာမယျ့ ပုံစံမြိုးပါ။ Fifa ဖွဈဖွဈ FPS, Battle Royale တဈခုခုဖွဈဖွဈ ဒါမှမဟုတျ NFS ဖွဈဖွဈ ကစားတဲ့ အခါ ကိုယျ့ရဲ့ stress level မြားတဲ့အခါတှရှေိပါတယျ။ ဒီအခြိနျတှမှော အမှားလုပျရငျ ကိုယျ့အမှားတှကေိုမှတျထားပွီး console ကကိုယျ့ကို challenge လုပျပါလိမျ့မယျ။ ဒီတဈခုကတော့ ဂိမျးလောကတဈခုလုံးအတှကျ အသဈဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
Real Dynamic Weather Technology – အပွငျတကယျ့လောကမှာ နှငျးတှကေနြတောပဲဖွဈဖွဈ မိုးဖှဲဖှဲကနြတောပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျရဲ့ game ထဲမှာလညျး အပွငျကအတိုငျး ရာသီဥတုကိုလိုကျပွီးပွောငျးလဲပေးပါလိမျ့မယျ။ ဘယျဂိမျးမှာမဆို ဖွဈနိုငျပါလိမျ့မယျ။
Translate By Playstation – online ရောကျသှားတဲ့ အခါ gamer တိုငျးရဲ့ မိခငျဘာသာစကားကမတူပါဘူး။ gaming language ဆိုတာရှိပမေယျ့ gamer ဆိုတဲ့သူတိုငျးလညျး နားမလညျပါဘူး။ “Boss aggro big, wait, omw” ဆိုတာလောကျသိကွပမေယျ့ အမွဲတမျးတော့လညျး party တိုငျးပှဲမစညျဘူးမဟုတျလား။ ဒီအတှကျ ဘာသာစကားတဈခြို့ကို realtime transltion ပါလာနိုငျပါတယျ။ audio ပဲဖွဈဖွဈ chat ပဲဖွဈဖွဈပါ။
ဒီလောကျပါပဲ၊ တဈခွား အခကျြတှတေော့ရှိပါသေးတယျ၊ technical သိပျဆနျတဲ့အခါလူတိုငျးအတှကျ မဟုတျဘူးဖွဈသှားမှာစိုးလို့ မဆကျတော့ပါဘူး။ ဒီလောကျဆိုရငျပဲ ကြှနျတျောတို့လိုခငျြတော မလိုခငျြတာတှကေိုမှနျူလို့ရမယျ ထငျပါတယျ။
ကြှနျတော့အတှကျ personally ပွောရရငျတော့ bullshit ပါဗြာ။ Smart console နဲ့ Stress sensor ကတော့ လကျရှိ AI နညျးပညာအရ ဖွဈသငျ့တာကွာနပေါပွီ။ ကနျြတာတှကေ အရေးမပါတဲ့ ကိစ်စတှပေါ။ compatibility ကိစ်စပဲလိုခငျြတာ။ သိတယျမဟုတျလား။
လုပျလိုကျဦးလေ၊ နောကျဆုံးတဈခုက no disc ဆိုပွီးတော့။ hacker friendly version ဖွဈသှားတာပေါ့… ဟေးဟေး..
သူကတကယျတော့ concept တဈခုအားအားယားယားလုပျထားတာမြိုးပါ။ ဒါပမေယျ့ တကယျ့ console သမားတှဘောလိုခငျြလဲသိရငျကောငျးမယျ။
Tags concept FAKE Playstation PS5 sony